Ndị uwe ojii, ndị Royal Canadian Mounted Police, RCMP n’aha ịchafọ, ejidogo mmadụ abụọ a na-ebo ebubo na ha na-akpa nkata ibuso ndị njem ụgbọ oloko agha iyi egwu na Toronto.
Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n’ụbọchị Mọndee, osote onye isi ndị uwe ojii, James Malizia, kwuru na ha jidere ụmụ nwoke abụọ, Chiheb Esseghaier, gbara afọ 30, ya na Raed Jaser, gbara afọ 35. Chiheb bi na Montreal ebe onye ogbo ya bu Raed bi na Toronto.
Ndị uwe ojii na-ekwu na, site na enyemaka ndị otu Alkaida na mba Iran, mmadụ abụọ ndị ahụ na-akpa nkata maka iji egbe na mgbọ ogbunigwe wakpo ụgbọ oloko si Toronto aga New York.
Malizia gwara ndị nta akụkọ n’o tego aka ndị uwe ojii ji eso ụmụ nwoke abụọ ahụ, na-enyocha akparama agwa ha, na-akpara ha ọnya. Ọ gbakwụnyere sị na Chiheb na Raed akpachagorị nkata, ma dịzie njikere igbu ọtụtụ ndị njem ụgbọ oloko si Toronto aga New York. Ndị uwe ojii malitere ịnyocha akparama agwa mmadụ abụọ ahụ n’ọnwa August afọ 2012.
Taa bụ Tuzdee, a gbara Chihed na Raed akwụkwọ n’ụlọ ikpe na Toronto. E kpebiri ịhapụ ha n’ụlọ nga na Toronto ruo n’abalị 23 nke ọnwa Mee, oge a ga-amalite ikpe ha ikpe.